Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: November 2018
ေတြးရင္းေတြးရင္း စားဖိုမွဴးအိမ္႐ွင္မကို ကိုယ္ခ်င္းစာမိတယ္။ #Customer #စားသံုးသူဆိုတာ ခ်က္သာမခ်က္တတ္တာ၊ ပါးစပ္အရသာက် အလြန္ခံတတ္သူမ်ား။ ေပါ့ျပန္ၿပီ။ ငန္ျပန္ၿပီ။ အယ္ရာတက္ျပန္ၿပီနဲ႔။ ဟိုလိုေလး ခ်က္လိုက္ပါလား ဒီလိုေလး ခ်က္လိုက္ပါလားဆိုတာ ပါးစပ္နဲ႔ ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက စားဖိုမွဴးထက္သာတယ္။
သို႕ေသာ္ ဒီလို ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္လူထက္စာရင္ ငန္ငန္ေပါ့ေပါ့ က်ိတ္မွိတ္စားေနတဲ့သူက သာဆိုးတယ္။ ဟင္းအရသာ လက္ရာကို မေဝဖန္မွေတာ့ ကိုယ့္လက္ရာ ေကာင္းမေကာင္း ဘယ္လိုလုပ္ သိႏိုင္ေတာ့မလဲေပါ့။ စားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေဘးသြန္ေနသူလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ ထားပါေတာ့...။ ေရးရင္းနဲ႔ ေဘးေခ်ာ္သြားတယ္။
#အိမ္႐ွင္မကို #ကိုယ္ခ်င္းစာမိတယ္ဆိုတာက ဒီလို...
#လက္ရာေကာင္းေကာင္း (product) ရဘို႔ #ဟင္းစားနဲ႔ #ဟင္းခတ္ပစၥည္းေကာင္းေကာင္း သံုးဘို႔လည္းလိုတယ္။ #ခ်က္တဲ့သူရဲ႕ #ကၽြမ္းက်င္မႈလည္း လိုတယ္။ ခ်က္တဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္ရဲ႕ ဖက္ဆယ္လတီ ပံ့ပိုးမႈ ေကာင္းဘို႔လည္း လိုတယ္။ စားသံုးသူရဲ႕ ေဝဖန္မႈလည္း လိုအပ္တာပဲ။
ေနာက္အဆိုးဆံုးတစ္ခုက #ဟင္းလ်ာဆိုတာသိုးတတ္တယ္။ ကာလအတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္းမွာ မစားသံုးရင္ လံုးဝ အရသာမဲ့ေသာ အျဖစ္ကို ေရာက္ကိုေရာက္သြားမွာ။ စားဖိုမွဴးဆိုတာ ဒီသေဘာကို သိရက္နဲ႕ ကိုယ္ခ်က္ၿပီးတဲ့ဟင္း မသိုးေသးခင္ ကာလေလးအတြင္းမွာ စားသံုးေပးတဲ့သူ ႐ွိမွာအမွန္ပဲဆိုတဲ့ စိတ္ထားေလးထည့္ၿပီး လက္ရာေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားခ်က္ျပဳတ္ၾကသူမ်ား။
သူမ်ားအိမ္က မီးဖိုေခ်ာင္ (#IDE) ေပၚမွာ မီးဖို(#Framework) ဆင္ၿပီး ခိုးယူလာတဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ (#Controls, #Tools)ေတြ သံုးၿပီး တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာရင္ အမိႈက္ပံုးထဲ ေရာက္မည့္ (#Deprecated / #useless ျဖစ္ေတာ့မည့္) ဟင္းလ်ာတစ္ခြက္ (#Program တစ္ခုကို) လက္႐ွိေဝဖန္အားေပးသံုးစြဲေပးေနသည့္ ေလး-ငါး-ဆယ္ဦးေသာ စားသံုးသူ (Loyal Customers)တစ္စုအတြက္ အခမဲ့(Royalty Free)ပံ့ပိုးရင္း ေပါ့ေပါ့ငန္ငန္ နင္းကန္ ေၾကာ္ေလွာ္ရင္းက (developingaproduct) စူပါမားကက္ထဲက အသစ္ထပ္ထြက္တဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ (Controls, Tools)ေတြကို သြားၾကည့္ၿပီး သားရည္က်ေနတဲ့ ေတာ္အိေရာ္အိ စားဖိုမွဴးႀကီးကၽြန္ေတာ္ (A novice programmer) တစ္ေယာက္ တကယ့္ စားဖိုမွဴးအိမ္႐ွင္မကို ကိုယ္ခ်င္းစာမိၿပီး ခ်ေရးလိုက္သည္။
ခဏေနရင္ သိုးမည့္ဟင္းဆိုေပမည့္လည္းေပါ့။ ဘယ္အရာမွ မၿမဲဘူးဆိုတာ အမွန္တရားတစ္ခုပါပဲ။
တြဲထားတဲ့ပံုကေတာ့ စူပါမားကက္ထဲက အသစ္ထပ္ထြက္တဲ့ သြားငမ္းၿပီး သားေရက်ေနတဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ (Controls, Tools) တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တွေးရင်းတွေးရင်း စားဖိုမှူးအိမ်ရှင်မကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။ #Customer #စားသုံးသူဆိုတာ ချက်သာမချက်တတ်တာ၊ ပါးစပ်အရသာကျ အလွန်ခံတတ်သူများ။ ပေါ့ပြန်ပြီ။ ငန်ပြန်ပြီ။ အယ်ရာတက်ပြန်ပြီနဲ့။ ဟိုလိုလေး ချက်လိုက်ပါလား ဒီလိုလေး ချက်လိုက်ပါလားဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့ ချက်တဲ့နေရာမှာ မီးဖိုချောင်ထဲက စားဖိုမှူးထက်သာတယ်။
သို့သော် ဒီလို ဂဂျီဂဂျောင်လူထက်စာရင် ငန်ငန်ပေါ့ပေါ့ ကျိတ်မှိတ်စားနေတဲ့သူက သာဆိုးတယ်။ ဟင်းအရသာ လက်ရာကို မဝေဖန်မှတော့ ကိုယ့်လက်ရာ ကောင်းမကောင်း ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်တော့မလဲပေါ့။ စားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘေးသွန်နေသူလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ထားပါတော့...။ ရေးရင်းနဲ့ ဘေးချော်သွားတယ်။
#အိမ်ရှင်မကို #ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်ဆိုတာက ဒီလို...
#လက်ရာကောင်းကောင်း (product) ရဘို့ #ဟင်းစားနဲ့ #ဟင်းခတ်ပစ္စည်းကောင်းကောင်း သုံးဘို့လည်းလိုတယ်။ #ချက်တဲ့သူရဲ့ #ကျွမ်းကျင်မှုလည်း လိုတယ်။ ချက်တဲ့ မီးဖိုချောင်ရဲ့ ဖက်ဆယ်လတီ ပံ့ပိုးမှု ကောင်းဘို့လည်း လိုတယ်။ စားသုံးသူရဲ့ ဝေဖန်မှုလည်း လိုအပ်တာပဲ။
နောက်အဆိုးဆုံးတစ်ခုက #ဟင်းလျာဆိုတာသိုးတတ်တယ်။ ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းမှာ မစားသုံးရင် လုံးဝ အရသာမဲ့သော အဖြစ်ကို ရောက်ကိုရောက်သွားမှာ။ စားဖိုမှူးဆိုတာ ဒီသဘောကို သိရက်နဲ့ ကိုယ်ချက်ပြီးတဲ့ဟင်း မသိုးသေးခင် ကာလလေးအတွင်းမှာ စားသုံးပေးတဲ့သူ ရှိမှာအမှန်ပဲဆိုတဲ့ စိတ်ထားလေးထည့်ပြီး လက်ရာကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားချက်ပြုတ်ကြသူများ။
သူများအိမ်က မီးဖိုချောင် (#IDE) ပေါ်မှာ မီးဖို(#Framework) ဆင်ပြီး ခိုးယူလာတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် (#Controls, #Tools)တွေ သုံးပြီး တစ်နှစ်လောက်ကြာရင် အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်မည့် (#Deprecated / #useless ဖြစ်တော့မည့်) ဟင်းလျာတစ်ခွက် (#Program တစ်ခုကို) လက်ရှိဝေဖန်အားပေးသုံးစွဲပေးနေသည့် လေး-ငါး-ဆယ်ဦးသော စားသုံးသူ (Loyal Customers)တစ်စုအတွက် အခမဲ့(Royalty Free)ပံ့ပိုးရင်း ပေါ့ပေါ့ငန်ငန် နင်းကန် ကြော်လှော်ရင်းက (developingaproduct) စူပါမားကက်ထဲက အသစ်ထပ်ထွက်တဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် (Controls, Tools)တွေကို သွားကြည့်ပြီး သားရည်ကျနေတဲ့ တော်အိရော်အိ စားဖိုမှူးကြီးကျွန်တော် (A novice programmer) တစ်ယောက် တကယ့် စားဖိုမှူးအိမ်ရှင်မကို ကိုယ်ချင်းစာမိပြီး ချရေးလိုက်သည်။
ခဏနေရင် သိုးမည့်ဟင်းဆိုပေမည့်လည်းပေါ့။ ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးဆိုတာ အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ။
တွဲထားတဲ့ပုံကတော့ စူပါမားကက်ထဲက အသစ်ထပ်ထွက်တဲ့ သွားငမ်းပြီး သားရေကျနေတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် (Controls, Tools) တချို့ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted by Ko Gyii at 10:29 PM No comments :
Yangon City past and present
Comparison imaginary of Yangon
Posted by Ko Gyii at 8:52 PM No comments :
Myanmar population history
မြန်မာ့လူဦးရေတိုးတက်မှု အခြေအနပြေဇယား ဖတ်ကြည့်ပါ။ ၁၈၇၂ခုနှစ်က တနိုင်ငံလုံး လူဦးရေ ၂၇သိန်းကျော်မှ ၂၀၁၄ခုနှစ် နောက်ဆုံး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ချိန်တွင် ၅၁သန်းလေးသိန်းကျော်အထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၈၃ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ် ကြားမှာ ၃၅သန်း သုံးသိန်း ကနေ ၅၁သန်း လေးသိန်းကျော်ဖြစ်လာတယ်။ ဒီ၃၁နှစ်အတွင်း လူဦးရေ ၄၅.၆% တက်လာတယ်။ ၁၆သန်းကျော် တိုးပွားလာတယ်။
Maung, M. Ismael Khin (April 1986). The population of Burma: An analysis of the 1973 Census (PDF). East-West Population Institute. ISBN 0866380779.
Population and Housing Census of Myanmar, 2014 Provisional results (PDF). 1. Nay Pyi Taw, Myanmar: Department of Population, Ministry of Immigration and Population. August 2014.
မြန်မာ့သမိုင်းမှတ်တိုင်များကတော့ ဆွဲလက်စ တန်းလန်းဖြစ်နေဆဲပါ
information credit to Wikipedia
Posted by Ko Gyii at 8:50 PM No comments :
Tharkayta Bridge and it's neighbors past and present
Image comparison of Tharkayta Bridge and it's neighbors
2003 and 2018
သာကေတတံတားအနီးဝန်းကျင်၏ သမိုင်းပုံရိပ်များ ၂၀၀၃ ခုနှစ် - ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကို ဘေးဘယ်ညာဆွဲ၍ ယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by Ko Gyii at 8:49 PM No comments :